Isikuta endizayo esivela kwi-movie ethi Back to the future kanye nentuthuko yaso | Nginike isikhathi sokuphumula
UGabriela moran | | Cine, Ifilimu eliqanjiwe lesayensi
Impela uke wabona noma, okungenani, uzwile ngoJehova trilogy ephumelelayo yefilimu Ukubuyela Esikhathini Esizayo. Ifilimu yokuqala yakhishwa ngo-1985 futhi yaba yimpumelelo kakhulu onyakeni. Yayinkulu kakhulu impumelelo yayo kangangokuba kwanqunywa ukuthi kukhishwe enye inkontileka ngemuva kweminyaka emine noSteven Spielberg njengomkhiqizi! Kwakungu-en le movie yesibili lapho kuvela khona isikuta endiza esivela ku-movie Back to the Future 2.
Amafilimu amathathu ayekhona Kudlala uMichael J Fox njengoMarty McFly noChristopher Loyd njengososayensi ome njengeqanda. Ifilimu ngayinye ibeke abalingiswa abakhulu ezinkathini ezahlukene ngenxa ye- ukuhamba isikhathi ku-DeLorian. Ngaphandle kokungabaza, i-trilogy imele inqubekela phambili ebalulekile kuhlobo lwezinganekwane zesayensi ikakhulukazi. Kepha ngaphezu kwakho konke, isitolimende sesibili siveze okulindelwe okukhulu maqondana nekusasa nentuthuko yezobuchwepheshe ebingaba khona, kunjalo ngesikuta esikwi-movie. Qhubeka ufunde ukuthola yonke imininingwane ngale gajethi entsha nokuthi yini okusha ngayo!
1 Isithuthuthu esindizayo esivela ku-movie Buyela Kusasa 2
2 Emuva esikhathini samanje… Ukugubha iminyaka engama-30 yochungechunge kugujwa!
3 Ngabe isikuta endizayo esivela kwi-movie ethi Back to the Future sesivele siyinto engokoqobo?
4 Yini ongayilindela manje?
5 Izikuta zamanje
Isithuthuthu esindizayo esivela ku-movie Buyela Kusasa 2
I-protagonist ngu UMarty: ibhungu elineminyaka engu-17 elihlala lisuka kwenye indawo liye kwenye ngesithuthuthu salo nokuthi uyingxenye yeqembu lomculo wesikole lapho edlala khona isigingci. Unentombi egama linguJennifer kanti umngani wakhe omkhulu ngu-Emmet, usosayensi omthatha ahambe nohambo lwesikhathi futhi waziwa kakhulu njengo "Doc."
Ifilimu iqala ngo-1985 kanti abalingisi abaphambili bahambela iminyaka engama-30 ezayo. Badinga ukuqedela ukuthunywa ngo-Okthoba 21, 2015!
Ukubuyela esikhathini esizayo 2 kungenye yamafilimu aphumelele kakhulu ohlotsheni lwezinganekwane zesayensi. Imiphumela ekhethekile yayihlaba umxhwele ngesikhathi sabo! Amaqiniso kude njengezithombe ze-XNUMXD, izimoto ezindizayo kanye ne-scooter esetshenziswe nguMarty zaphakanyiswa.
El isikuta endizayo esivela kwi-movie ethi Back to the Future saba yisithonjana kubalandeli be-trilogy. Ukuhlangana kukaMarty nezindlela ezintsha zokuhamba kwaba ngengozi, ngoba kwakuyindlela ayeyisebenzisa ukunqoba impi engxenyeni ethile yesakhiwo.
Ngaphandle kwendaba esingayisho, ngaphandle kokwesaba ukuthi sizophutha, lokho into ebaluleke kakhulu kule filimu kwakuwumbono abadali ababumba ikusasa ngawo. Le filimu ibonisa impendulo engaba khona yombuzo waphakade: ikusasa lizoba njani esikhathini esithile?
Emuva esikhathini samanje… Ukugubha iminyaka engama-30 yochungechunge kugujwa!
Ikusasa lasifikela nonyaka ka-2015 wafika! Abalandeli babebheke phambili ku-Okthoba 21. Lokhu, ngoba kwifilimu yesibili, lelo bekungusuku olukhonjisiwe lapho ukufika kukaMarty noDoc esikhathini sethu kuzokwenzeka.
Ukukhumbula iminyaka engama-30, amanye amazwe aphinde akhipha amafilimu amathathu kumathiyetha. A umlayezo osemthethweni ovela kuDokotela Emmet Brown ukubhekisa abalandeli besaga futhi kuboniswe ngezansi:
Ukulindela bekukukhulu njengoba kungenzeka izimanga eziningi. Kwakuyithuba izinkampani ezingalisebenzisa ngokugcwele! Lokhu kunjalo ngokwenziwe ngabakwaNike, uPepsi noLexus. Le nkampani yokugcina yezimoto yethule uhlobo lokuqala olungafaniswa nesikuta esidumile esindizayo esivela kwi-movie ethi Back to the Future 2.
Ngabe isikuta endizayo esivela kwi-movie ethi Back to the Future sesivele siyinto engokoqobo?
Izinkampani eziningana zenze ama-prototypes ukufeza imodeli esebenza ngendlela i-scooter efilimu esebenza ngayo. ILexus, uhlobo lwemoto oludumile lungenye yazo
Isilayidi yigama likaLexus lesikuta esindizayo futhi liyantanta emoyeni futhi lingakwazi ukundiza ebusweni! Idivayisi isebenzisa ubuchwepheshe obukhona: amandla kazibuthe. Kungakho ngeshwa kungasebenzi kunoma iyiphi indawo, okungukuthi, kungashibilika kuphela kumathrekhi anomazibuthe abakhethekile.
Isithuthuthu se-Slide sisebenza ne-liquid nitrogen njengophethiloli, ukuqhathanisa. Ngakho-ke lapho isikuta sifudumeza, silahlekelwa yi-levitation futhi sidinga ukugcwaliswa kabusha nge-nitrogen. Ukusetshenziswa okujwayelekile kwalesi sikuta esindizayo cishe imizuzu engama-20. ILexus yakhiwe eCubelles, idolobha eliseduze neBarcelona, ​​ithrekhi ekhethekile ukuze ihlolwe.
Lesi sikuta esindizayo Akuthengiswa, okomzuzwana yisibonelo kuphela. Ekugcineni, lo mkhiqizo wasizakala ngokwakhiwa kwezobuchwepheshe kweSilayidi sawo kanye nesikhumbuzo se-Back to the Future ukuwusebenzisa njengokukhangisa ngezimoto zawo.
Yini ongayilindela manje?
Izinkampani ziyaqhubeka nokwenza ucwaningo nokutshala imali ekutholeni ubuchwepheshe obudingekayo bokuletha isithuthuthu ezindizayo ebesikade silindelwe kusuka ku-movie ethi Back to the Future.
IHendo yinkampani okwathi iminyaka eminingana yaqala iphrojekthi yesikuta endizayo esingathengiswa. Yize iHendo Hoverboard ingasebenzisi i-nitrogen engamanzi, isenemikhawulo yokusetshenziswa kokwethulwa kwayo.
UHendo usebenzise amaqoqo aqoqiwe akhiqize inani lemali elihehayo. Yini enye uthengise ezinye izinhlobo ezibiza ama-dollar ayizinkulungwane eziyi-10 ngesikuta ngasinye!
Ngenxa yomsebenzi wocwaningo nentuthuko, UHendo usungule ama-prototypes amaningana awaphelelisile. Ngibakhombisa emfanekisweni olandelayo:
I-trilogy ikhishwe ngawo-80, isikhathi lapho i-scooter yayithandwa kakhulu njengezinto zokuhamba nezokungcebeleka. Akekho owayengacabanga ukuthi kungenzeka ukuthi athole eyodwa endiza! Impela isitolimende sesibili se-trilogy siphakamise okulindelwe ezingqondweni zababukeli. Ezinye zazo sezivele ziyingxenye yempilo yethu yansuku zonke kanti ezinye zimane nje zaba.
Okudala iqiniso ukuthi Inhloso yezinkampani eziningi ukwethula isikuta ezindizayo esinemisebenzi efanayo naleyo esetshenziswe nguMarty McFly.
Okwamanje sinamagajethi athengiswayo futhi esidume kakhulu: ngikhuluma nge izithuthuthu zikagesi nokuthi bakhuthazwa ngumenzi we-movie.
Kuliqiniso ukuthi sisondela futhi sisondela! Kubukeka sengathi isimanga singafika ngokushesha kunokulindelekile ...
Indlela ephelele ye-athikili: Nginike isikhathi sokuphumula » Cine » Hlangana ne-scooter endizayo kusuka ku-Back to the future